Usoro ọrụ - Sendfiles.online
Site na ị banye na websaịtị ahụ https://sendfiles.online, ị na-ekwenye ka iwu nke aka gị wee kee ya, iwu na ụkpụrụ niile dị adị, ma kwenye na ị ga-akwụ ụgwọ maka irubere iwu mpaghara ọ bụla dị adị. O buru na ikwenyeghi w
Enyere ikike ka ibudata otu akwụkwọ (ihe ọmụma ma ọ bụ sọftụ) na nwa oge websaịtị Send maka naanị onye na-anaghị azụ ahịa ọhụụ. Nke a bụ onyinye nke ikikere, ọ bụghị mbufe aha, yana n'okpuru t
nwaa izoputa ma obu juhachi injinia obula nke di na websaiti.nate.online;
Akwụkwọ ikike a ga-akwụsị na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na ị mebie nke ọ bụla na mgbochi ndị a, enwere ike ịkwụsị ya site na Sendfiles.online n'oge ọ bụla. Kwụsị nhụta ihe ndị a ma ọ bụ kwụsị akwụkwọ ikike a, ị ga-ebibi nke ọ bụla
3. Iwu Nchekwa
Sendfiles.online na-echekwa faịlị maka awa 48. Kedu mgbe a na-ehichapụ faịlụ ahụ. Faịlụ ndị ahụ jikọtara na adreesị ozi-e webatara ha. Ọ bụrụ n’etinye email ka aga-eziga nke a na-echekwa. Ọ bụrụ na faịlụ ezigara ebe sitere n'aka onye ọrụ PRO, usoro dị iche iche ga-adị, ọ ga-egosikwa na ibe njikọ njikọ nbudata ahụ.
Enyere ihe di na websaili.online weputara n ’ebe odi ka odi. Sendfiles.online anaghị eme akwụkwọ ikike, ekpughere ma ọ bụ nke gosipụtara ya, wee kọwaa ma chefuo ikike ndị ọzọ niile gụnyere, na-enweghị mmachi, akwụkwọ ikike etinyere ma ọ bụ njikwa.
Ọzọkwa, Sendfiles.online anaghị enye ikike ma ọ bụ mee ihe ngosi ọ bụla gbasara izi ezi, nsonaazụ ya, ma ọ bụ ntụkwasị obi nke iji ihe ndị ahụ na weebụsaịtị ya ma ọ bụ na-emetụta ihe ndị dị otú ahụ ma ọ bụ na saịtị ọ bụla jikọtara na saịtị a.
5. Ihe mgbochi
Na mmemme ọ bụla ga-ezite Send.exe ma ọ bụ ndị na-eweta ya maka mmebi ọ bụla (gụnyere, na-enweghị njedebe, mmebi nke data na uru ma ọ bụ uru, ma ọ bụ n'ihi nkwụsị ahịa) na-ebilite na ojiji ma ọ bụ enweghị ike iji ihe ndị ahụ dị na Sendfiles.o
6. Izi ezi nke ihe
Ihe ndị gosiputara na webụsaịtị profaịlụ.ex.e nwere ike ịgụnye njehie teknụzụ, odide ederede ma ọ bụ foto. Sendfiles.online anaghị enye ikike na ngwa ọ bụla dị na webụsaịtị ya ziri ezi, zuru oke ma ọ bụ nke dị ugbu a. Sendfiles.online nwere ike m
Sendfiles.online enyochala saịtị niile jikọtara na weebụsaịtị ya, ọ bụghịkwa maka ọdịnaya nke saịtị jikọtara ọnụ. Ntinye nke njikọ ọ bụla apụtaghị nkwado nke Sendfiles.online nke saịtị ahụ. Iji weebụ dị otú ahụ ejikọtara
Sendfiles.online nwere ike inyocha usoro ọrụ ndị a maka weebụsaịtị ya n'oge ọ bụla n'amaghị ama. Site n'iji weebụsaịtị a ị na-ekwenye ka usoro iwu ọrụ ndị a dị ugbu a.
9. Iwu na-achị achị
A na-achịkwa ma rụọkwa usoro ndị a na iwu usoro Connecticut ma ị na-edobe isi na ikike ụlọ ikpe dị na steeti ahụ ma ọ bụ ọnọdụ gị.
© 2021 Sendfiles.online v1.15 | 75,266 faịlụ zitere kemgbe 2020